Ahoana no fomba ahazoako ny kalitao avo lenta kokoa amin'ny backlinks tsara indrindra, ankoatra ny fanehoan-kevitra sy ny fandefasana hafatra?
Manangana sarim-piraketana tsara amin'ny rohy manankarena amin'ny kalitao avo lenta DoFollow backlinks dia asa tena sarotra. Satria satria ny tranonkalan'ny tranokala na blôginao rehetra dia mbola mitoetra eo anivon'ireo singa fototra boribory izay raisina ho toy ny motera lehibe tahaka ny Google mihitsy. Ary noho ny antony marobe, matetika loatra isika no mividy lahatsoratra amin'ny vahiny sy fanehoan-kevitra mba haka rohy fanampiny ho an'ny tanjona SEO, fa tsy fanandramana fomba hafa amin'ny fanorenana rohy - laundry cupboards melbourne. Izany no mahatonga ahy haneho anao ireto toro-hevitra telo manaraka ireto hanatsarana ny kalitao DoFollow backlinks sy ny rafitra tena ambany indrindra amin'ny fanorenana rohy.
Manampy mpilaza vaovao (HARO)
Ity tranonkala ity dia manomboka amin'ny alàlan'ny fampiasana azy ireo. angamba ny toerana tsara indrindra ahafahana mampiavaka ny backlinks ambony mahazatra DoFollow - mivantana avy amin'ny loharanom-baovao tomponandraikitra izay mifandray indrindra amin'ny vaovao. Ny zavatra rehetra ilainao eto dia ny hanao sonia fotsiny ary ny mijery ny mailboxo. Hahafantatra momba ny fampitandremana telo isan'andro avy amin'ireo mpanao gazety tena izy ianao hikatsaka hatrany ny lohahevitra mafana. Raha raisina fa ny lohahevitra manan-danja amin'ny orinasa na orinasa orinasa dia tsy misalasala mamaly ary manome ampahany votoaty mahasoa mba hahazoana toeram-pivarotana ambony mahazatra ho an'ny DoFollow ho an'izany.
Fampahalalana ny fampahalalana
Mamolavola ampahany amin'ny votoatiny tsotra amin'ny endritsoratra amin'ny zavatra iray amin'ny endrika manintona sy manintona toy ny infographics na spreadsheets - koa dia fomba lehibe hamporisihana ny mpitsidika anao hizara, hanoratra , taranaka tarika, ary mazava ho azy mifandray aminao amin'ny avo lenta DoFollow backlinks. Ny zava-misy dia ny ankamaroantsika dia manamaivana ny fampiasana fitaovana mahomby amin'ny famoronana ny rohy natoraly. Ny famoronana ny informatika marina dia matetika loatra no mihevi-tena ho asa mandany fotoana sy mahomby. Fa ny zava-drehetra dia tsotra kokoa noho izay mety eritreretinao. Mampiasà fitaovana manokana toy ny Canva, Piktochart, na Infogr. am - ary mamerina izany asa goavana izany taloha momba ny adin'ny minitra. Raha vao vita ny rakitsary voalohany anao, dia aza hadino ny manolotra izany amin'ny iray amin'ireo tranonkala fanontana (tahaka ny Visual. hahatratrarana; Cool Infographics; Infographic afa-tsy; Pure Infographics; sns. ). Na azonao atao ihany koa ny mitarika mpitoraka bilaogy sasany ao aminao mba hanolotra azy ireo ny sary nalaina vao haingana ho an'ny tranokalam-baovao maimaim-poana - ary ankafizo ny backlinks ho an'ny avo roa heny ho an'ny ho avy.
Link recclamation dia asa tsotra tsotra izay miasa toy ny magic tena izy. Tena marina, eto ny fomba fiasany. Ampiasao ny fitaovana fijerena rindrambaiko Buzzsumo mba hahitana filazana momba ny anaran'ny orinasanao, tranokala, na bilaogy - ny ilainao dia ny mamantatra hoe iza no tsy mbola mifandray aminao. Avy eo, mitantana mailaka haingana amin'ny alàlan'ny mailaka ho fampahatsiahivan-tsaina. Ny famerenana ny rohy dia tetika mora sy malefaka mba hahazoana ny kalitao avo lenta nataon'i DoFollow izay tsy noraisina tamin'ny rohy momba ny rohinao noho ny antony. Noho izany, izao no fotoana hamerenana izay efa najainao, sa tsy izany?